Kuchenesa mota, Medium Kuchenesa mota, Washer mota - Shandong Zvirinani mota
Isu tinopa ZVAKANAKA ZVINHU ZVINHU
Shandong Zvirinani mota Co, Ltd inyanzvi mukuvandudza, kugadzira
uye kutengesa kwe AC akateedzana mota uye DC zvachose magineti mota.
Kune zvimwekupfuura makumi maviri emhando yezvigadzirwa, mazana ezvinotaurwa.
Eghigh kumanikidzwa pesin mota,mhepo compressor mota uye yekuveza michina mota nezvimwe.
Zvirinani kutanga kuburitswa AC akateedzera mota anoshandiswa pakumanikidza pesher muChinawhich inoonekwa se
inotungamira mhando yemuchina wekuwacha mota.
Zvirinani zvinotarisa mukuvandudza AC akateedzana mota uye DC zvachose magineti mota kwenguva yakareba
kubva zvatanga.Kunyoreswa trademark "BTMEAC" inozivikanwa nemabhizinesi mazhinji anozivikanwa zvese pamusoro penyika
Series Spiral Bevel Kurudyi Angle Gear Reducer mota
Motor For chainsaw michini (HC20230B)
Mota Yechina chainsaw michini (HC8840A)
Permanent Magnet Motors Emhepo Compressor (ZYT ...
Motokari YeMhepo Compressor (HC9535)
Vacuum Cleaner mota (HC8223)
HC96 Dzinotibatsira yakakwirira kumanikidzwa pesin (HC7625 / 30/40)
Kunyanya tarisa pane matatu akateedzana emota: Imwe-chikamu mota (yepasi mota), DC zvachose magineti motors, uye imwechete-chikamu asynchronous mota, ayo zvachose anopfuura makumi maviri marudzi uye mazana ezvinongedzo zvinosanganisira yakakwira yekumanikidza yekuchenesa mota, yekuveza mota, mweya compressor. mota, yepasi processor mota uye fan mota.
Zvirinani mota (BTMEAC) ine timu yehunyanzvi yehunyanzvi, iyo ine mainjiniya makumi maviri nerimwe vane mazita ekuremekedza emuchina wemagetsi indasitiri uye zvimwe zvinhu. Gore rega rega kambani inogadzira zvinopfuura makumi maviri zvigadzirwa zvitsva uye zvigadzirwa zvinopfuura mazana matatu zvigadzirwa.
Yepamberi yekugadzira zvivakwa senge punch yekudhinda, ichitenderera muchina, kuita kwekuyedza muchina nezvimwe kubva kuUSA, Switzerland, Japan, zvakare epamba Jinminjiang otomatiki ichitenderera muchina.
12 Kurume 2018
Shandong Zvirinani mota Co, Ltd.